Dobodin-kiraro Hoe mifamoaka amin'ny gorodom-boaloboka sy ny rindrina
Home / Sitroka an-dakozia / WOWOW Milentika ao anaty lovia an-dakozia tokana miaraka amin'ny grid sy tatatra 30 santimetatra
Dobodin-kiraro WOWOW Solika iray milentika miaraka amin'ny Grid et Drain 30 santimetatra
Ao an-dakozia, ilaina be ny fandroana, fa ny farina dia matetika tsy voahaja, tsy ny endrika ihany no iray fa ny tsy fahita firy koa. WOWOW dia manome ravina mahafinaritra izay afaka mampitombo tokoa ny fahatsapana haingo ao an-dakozia.
Rivo-diloilo roan-tsoavaly WOWOW indram-baravarana amin'ny grid sy Dr ...
Voafidy tsara ilay labozia, ka tsy misy olana amin'ny fanasana vilany! Ny fisafidianana ny lava-drano mety dia mampamirapiratra ny lakozia manontolo ary mahatonga ny olona hahatsapa ho tsara rehefa miditra ao an-dakozia izy ireo. Tsotra toy ny hoe raiki-pitia amin'ny fanasana lovia sy ny fitiavana ny mahandro izany!
DIMENSY: 30 in. L x 19 in. W x 10 in. D; Haben'ny kabinetra kely indrindra: 33 in.
304 vy vita amin'ny vy matevina, teknolojia marefo marefo, manerinerina sy mitafy fanoherana, mora diovina. mifanentana amin'ny ankamaroan'ny kojakoja an-dakozia.
Ireo lemon-drano azo alain-tahaka: ity lalandrano lalina sy mahitsizoro ity dia misy fatana mandeha amin'ny tatatra izay mitrandraka rano ary miantoka ny tsara indrindra amin'ny fantsakan-drano.
Ny fonosana dia miaraka amina lakozia misy savaivony 30 santimetatra, manondraka fivoriambe ary efitrano maloto.
Serivisy: fiverenana maimaimpoana 3 volana sy averina vola, pls mividy am-pahatokisana. Raha manana fanontaniana ianao dia tongava soa aminay.
SKU: W70101-30-AMUS Sokajy: Sitroka an-dakozia Tags: lovia tokana, lakozia vy any ambany, undermount
Habe amin'ny Kabinetra kely indrindra
Ambanin'ny laoniny famonoana bisikileta tokana ...